Obere akpa na ngwa eji si taya arụ ọrụ | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Ọtụtụ ndị na-emepụta ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ dị iche iche n'ụwa malitere iji ya eme ihe taya akpa tubes maka imepụta obere akpa na ngwa dịka wallets, belt, purses, ring rings, Laptopbag, wdg.
El roba roba ọ ghọọla ihe eji achọ mma ma dabara adaba iji dochie akpụkpọ anụ na ngwongwo akpụkpọ anụ. Na roba ọ ga-ekwe omume inye ya ezigbo mmechi ma ịgbakwunye nha, mmechi, dị ka ịkwa ya, dye ya ma ọ bụ ọbụna tee ya ka ị nwee ike ịhazi ya n'ụzọ pụrụ iche.
na taya A na-eji nke ịnyịnya ígwè, ọgba tum tum, gwongworo, ụgbọala na ọbụna traktọ emepụta ngwaahịa.
Ọ bụ ya mere e ji nwee ọtụtụ ụlọ ọrụ, ndị ọrụ aka na ndị na-emepụta ihe na-eji ha arụpụta ihe ngwaahịa na gburugburu ebe obibi.
Fọdụ ndị a ma ama na-ese ihe bụ:
Passchal: bu otu ulo oru kachasi nma na nhazi nke recycled akpa. Modelsdị ya bụ okomoko maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị. Ọtụtụ ndị a ma ama na-eji akara a emegharị akpa. Usoro ha niile mara ezigbo mma.
Ecooriginal brand: ụlọ ọrụ a na-arụpụta ma na-ere obere akpa yana ngwa dị na European Union. Ngwaahịa ya dị iche iche ebe ọ bụ na usoro mmepụta na-elezi anya ịchekwa mma nke taya ahụ ka ọ bụrụ nke mere na ụdị ya na onyinyo ya pụrụ iche.
Cinnamon-art: Ebumnuche a chọrọ imepụta ngwaahịa pụrụ iche nwere mmetụta gburugburu ebe obibi dị ala, nke mere na ọ na-eji ngwaahịa ndị a na-emezigharị dịka taya ma na-ejikwa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkụ eletrik na mmepụta ya ka ha wee nwee ebe obibi na ejiri aka.
Ọrịa Pneumatics: Nke a bụ ụlọ ọrụ ndị Argentina nke na-ejigharị taya iji mepụta akpa na obere akpa nha niile.
Boo Noir: Uwe a na-eme ka eco na omume mara mma na-arụkwa akpa na obere akpa site na iji taya dị ka akụrụngwa. Atụmatụ ndị ahụ dị na mbụ na nke kachasị mma na gburugburu ebe obibi.
All ndị a aghụghọ bụ n'ezie ebe obibi ebe ọ bụ na ha egweri a n'efu na-tụfuo ozugbo ọ na-Emechara iji dị ka taya. Ma ha nwekwara n'ezie ọgbara ọhụrụ, aghụghọ mara mma ma n'otu oge ahụ ha na-arụ ọrụ zuru oke.
Na nka, na imeghari na nchegbu gburugburu ebe obibi na-eme ka ndị mmadụ site n'akụkụ dị iche iche nke ụwa mepụta ngwaahịa ndị ọzọ bara uru ma na-elekọta gburugburu ebe obibi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Nzughari » Obere akpa na ngwa eji si taya arụ ọrụ
Naanị m maara akara Passchal na akara Boo Noir. Na Boo Noir ụlọ ahịa m zụtara a recycled taya akpa afọ abụọ gara aga, na ọ bụ dị ka ọhụrụ. Na akpa na ndị enyi m mmasị kasị ... site n'ịkwado gburugburu ebe obibi ị nwekwara ike ịga ejiji na N'ezie, na a nnọọ mbụ akpa.
mbg ecomundo bụ San Luis Argentina obere akpa obodo, ma ọ bụ na facebook San Luis roba wallets.
Zaghachi Jorge Pedro Astorga
adriana restrepo mee ya. dijo
Ndewo onye ọ bụla, enwere ụlọ ọrụ micro-na Medellin Colombia nke na-arụpụta ngwaahịa na taya arụgharị, yana imewe, ogo na itinye aka na gburugburu ebe obibi, AR escodiseño, ị nwere ike ịchọta ya na facebook peeji nke ka anyị kwado ya, ọ bụ onye mmeri nke ebumnuche ahụ maka gburugburu ADRIANA RESTREPOA.
Zaghachi adriana restrepo agudelo.
Ihe mkpuchi anụ ahụ na nke obibi